वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७५ असार ४ गते १९:२८
काठमाडौँ, ४ असार । वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन सोमबार साँझ निधन भएको छ । पित्तथैलीको क्यान्सरबाट पीडित उनको बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा ५ बजेर ३५ मिनेटमा निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
वीर अस्पतालमा २५ वर्ष सेवा गरेका उनी अहिले बाँसबारीस्थित न्युरो हस्पिटलमार्फत् बिरामीको सेवा गरिरहेका थिए । ७ महिना स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनले थुप्रै राम्रा कामको सुरुवात गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा उनले भारत आसाम मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस गरेका थिए ।